Big Money Slingo bhonasi |
Big Money Slingo bhonasi
Kana uri kukuchidzira kuti Slingo mitambo izvo zvikurukuru mubatanidzwa cheap car insurance uye bingo, ipapo Big Mari Slingo bhonasi zvachose inokosha wekuedza. Hakuna mumwe asi 6 nzvimbo apo unogona kutamba mutambo uyu. Unogona kusarudza kwako tora sarudzo yako pamberi kutanga mutambo. Richakunda rine Slingo iri rakakura apo unogona kukunda kumirangariro £ 250,000 Jackpot. Kuti akunde ichi £ 250,000 Jackpot, unofanira mafomu kunonyanyisa nhamba mitsara nekukurumidza. Rave yakagadzirwa uye kugadzirwa IWG uchitamba mutambo Software Developers uye vakaita zvimwe here chinoshamisa basa Graphics uye Gameplay.
Play Big Money Slingo uye kuhwina £ 250,000 Jackpot
Slingo Uyu unongova mumwe mhando. Just pakutanga mutambo, uri kupiwa mukana kusarudza pakati nzvimbo nhanhatu kutamba kubva. Nzvimbo dziri Jokers Hamlet, Golden Fields, Royal Forest, zvisiri pamutemo Cove, Diamond Peak uye Lucky Gulch. Mumwe nomumwe yenzvimbo idzi ane zvakasiyana mari kuti inotanga kubva yakaderera 50p nokuda Joker kuti Hamlet uye kunosvika £ 15 nokuti Lucky Gulch. The Gameplay neimwe yenzvimbo idzi chete. Musiyano chete ndiyo mari mubayiro uye inowanikwa chomutambo. Pane mukana here kubata munhu £ 250,000 jackpot panozopera mutambo uyu.
Big Money Slingo bhonasi Gameplay
The Gameplay ichi chinoshamisa mutambo yakareruka. Mangoti anotanga, muchaiswa 6 nzira yacho nzvimbo uchida kutamba nenguva. Mushure sarudza mumwe matanhatu zvokusarudza, iwe vachaendeswa huru chidzitiro. Mumwe bheji vanokupa 6 Muruoko rwake anobata chirukiso uye unotofanira kuita kunonyanyisa nhamba mitsara. You zvino kuti tinya kutanga bhatani uye kusvikira 4 Jokers kucharatidzwa mundege yako. Mumwe kuruka zvichaita kana pachena nhamba kana akasununguka kuruka. The jokers kuti akawedzerwa pakutanga ari Gameplay achava nenzvimbo bhokisi iroro uye hamuna zvichaita kuti chiratidzo kure vari patafura. mutsetse mumwe nomumwe achava museve pa musoro wayo kuratidza chitsama mari kuti unogona kukunda kubudikidza aikwikwidzana mutsetse kuti. Unogona kukunda kwakaenzana munhu £ 250,000 jackpot ndakapedza mitsetse izvi.
Slingo ine mitemo chaizvo zvinoshamisa uye inokwezva chaizvo Graphics. Izvi Zviripachena boka kufadza ane guru £ 250,000 jackpot uye nyore Gameplay. You zvirokwazvo kuenda zvakawanda zvinonakidza achitamba ichi kana uri bingo kana slots feni.